Betta Izifo Zentlanzi | Ngeentlanzi
El Intlanzi yeBetta lolunye lweentlobo ezithandwa kakhulu bathwaxwe zizigulo nangona uninzi ngononophelo olufanelekileyo lunokunyangeka. Esinye sezifo esixhaphakileyo sesokuba sithathwa ngumngundo okanye saziwa ngcono njengesifo sokungunda kwaye sihlala sivela xa iitanki ezifumaneka kuzo zingaphathwa kakuhle ngetyuwa.
Ukuba intlanzi ye-betta ibonisa i-hue ebalaseleyo kunesiqhelo kwaye Iindawo ezimhlophe ezifana nekotoni emzimbeni wakhe kukuba unesifo esifunyenwe kwisikhunta kwaye okwangoku, siyosulela, into yokuqala ekufuneka yenziwe kukwenza intlanzi iyodwa kwaye inyange.
Intlanzi yeBetta inokuba nayo ukosuleleka kwiintsholongwane ukuba ujonge amehlo omnye okanye bobabini baphume entlokweni yakhe. Olu luphawu losulelo lwebacteria olubizwa ngokuba liliso likapapa. Iintlanzi zakho zinokuba nesi sifo ngenxa yamanzi amdaka etankini okanye ngenxa yesifo esibi kakhulu, njengesifo sephepha. Ngelishwa esi sifo alunanyango.
Esinye isifo kukuba unesifo se-ich. Eyona nto iphambili kuyo kukuba iintlanzi zinamachokoza amhlophe okanye amabala. Kwaye ke iintlanzi zikrwela kwiindonga ze-aquarium. I-eIsifo seIch Ihlasela iintlanzi ezixinzelelweyo ngenxa yokungalingani kwamanzi kunye nokuhla kumanzi pH.
Ukuba unamaxolo adumbileyo unesifo sokudumba isifo sentsholongwane esingakhokelela ekusileleni kwezintso kunye nokwakha ulwelo okanye ukudumba. Esi sifo sinokuvela kwiimeko ezimbi zamanzi okanye xa utye ukutya okungcolileyo. Akukho lunyango lokudumba, kodwa inokuthintelwa ukuba iintlanzi zakho azityi iintshulube eziphilayo kunye nokutya okungcolileyo.
Ukuba umsila weentlanzi zakho okanye amaphiko enxityiwe okanye zibonakala zinombala ziimpawu zosulelo lwebacteria ezibangela ukuba iintlanzi zakho, umsila kunye nomlomo zibole. Ukubola kuvela kwimeko embi ye-aquarium okanye ngenxa yokuba ezinye iintlanzi ziyaluma. Inayo iyeza kuba iyaphuma kwakhona, nangona ingekho ngombala ofanayo nentsusa yayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » Intlanzi » Izifo zentlanzi iBetta
UMiguel Zambrano sitsho
Unjani, umhle indlela yakho yokuziveza malunga nobomi bamanzi kwaye ndiyabelana nabo.
Ndinengxaki noBetta wam, ndinayo ifoto yakhe kodwa andinokwabelana ngayo ngale ndlela. Ulusu lwakhe ngaphezulu kwaye lusondele kakhulu emehlweni akhe lwaqala ukubuna kwaye lwathatha umbala omhlophe. Andazi ukuba inokuba yintoni. Ndiyeke ukutya kodwa xa ndiyifaka kwindawo endihlala kuyo amanzi netanki leentlanzi ngamanzi angama-29 degrees yaqala ukusela kwakhona. Ndiyiphatha ngetyuwa kodwa andazi ukuba ndenzeni. I-wsp yam ngu-930944173. Ukuba ungandinceda ..
Phendula uMiguel Zambrano